Ndakaona rino zimboro rinetsinga beche rangu rakabva ratota ipapo! - Masasi eHarare
DzeBonde Ndakaona rino zimboro rinetsinga beche rangu rakabva ratota ipapo!
Ndakaona rino zimboro rinetsinga beche rangu rakabva ratota ipapo!
Ndakanzwa umwe murume achisheedzera ‘’Fresh hove $1 dzakawanda’’, ndakati mukwasha svikai nepano tione kuwanda kwadzo. ‘makadii amai, auya mkwasha wehove hombe dzakachipa’’ akadaro achivhura bucket raiva nehove. Ndakati pimai tione kuwanda kwadzo mukwasha, chimbi chimbi kupima semunhu aifarira basa rake uye kuda kutengerwa haana kutora nguvai zvikanzi idzi . Ndakangoti aaaaaah ndokuwanda kwacho here uku wedzerai imwe 1 akamboda kuramba ramba asi akangoti horaiti ndokuisa imwe 1. ‘apa ndakuitirai favour chaizvo muneluck’’ achisekerera hake, dzinoda kuvhurwa nepakati modzipisa nemafuta zvekuti kana baba vachanakirwa’’ akadaro achivhara bucket rake. ‘zvakuda vanozvigona zvekutsemura nepakati isu vakadzi chatogona kuvhura chete’’ ndakadaro ndichisumka ndichida kunotora mari nepekuzoisira hove, ndakanzwa oti kana mune banga rakapinza ndipei ndikutsemurirei sezvo mati zvekucheka zvinonetsa.
Ndakaona murume akunyara achiedza kuisa bucket rehove pamberi kuti ndisaona ndikati chero mukavhara ndaona kare. ‘ndimi varume vanoita hwejongwe ungadai nefoto ko ukazoona beche rangu unodii, ndakadaro ndichiswedera pedyo naye. Asi pachokwadi murume akanga akunyara asi ini ndaitoisa smile nekuti ndainge ndakuda kusvirwa. Ndakasvika kuisa mari muhomwe yake yetrouse ndikati aizvee inga yakatomira nhai zvino muchabuda sei kuvanhu zvakadai. Ndakabuditsa ruoko ndikamuvhura zipi ndikaona rino zimboro rinetsinga ndichiona kudaro beche rangu rakabva ratota ndakangoti inga mukwasha mune chipo chamakatakura mai vekwenyu vari pamudya ndigere, akangoti mudya ndigere upi handisati ndaroora zvangu achigadzika bucket rehove pasi.
Ndakaona rino zimboro rinetsinga